यस्तो के भयो ? श्रीमती नरहेपछि छोरीलाई विष खुवाएर बुबाले गरे आत्महत्या (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
यस्तो के भयो ? श्रीमती नरहेपछि छोरीलाई विष खुवाएर बुबाले गरे आत्महत्या (भिडियो सहित)
Mahesh Bohara September 24, 2019
आ त्मह त्या दु रुत्सा हनको मु द्दा लागेपछि कैलालीमा बाबुले छोरीको ह त्यासँगै आ त्म ह त्या गरेका छन् । गौरीगंगा नगरपालिका–५ का रामबहादुर कलेलले छोरीलाई सल्फास सेवन गराएर आफूले पनि आ त्म ह त्या गरेका हुन् । श्रीमती नरहेपछि छोरीलाई वि ष खुवाएर बुबालेआ त्म हत्या गरेका हुन् । ३ वर्षीय छोरी अनुष्कालाई स ल्फास खु वाएपछि आफैले पनि खाएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्र हरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० दक्षकुमार बस्नेतका अनुसार गएको वैशाख १६ गते रामबहादुरकी श्रीमती सरिता कलेलले कोठामै झुण्डिएर आत्म ह त्या गरेपछि उनीविरु द्ध आ त्मह त्या दु रुत्सा हनको मु द्दा दर्ता गरिएको थियो । सरिताका माइती प क्षले रामबहादुरविरु द्ध आ त्म ह त्या दु रुत्सा हन मु द्दा दर्ता गरेका थिए । गत जेठ २६ गते जिल्ला अ दालत कैलालीले रामबहादुरलाई पुर्पक्षका लागि का रागार चलान गरेको थियो । साउन २२ गते अ दालतले उनलाई नि र्दोष ठ हर गरेपछि उनी छुटेका थिए । भिडियो हेर्नुहोस ।